Auto Ingxenye Yiba nenceba
Iindibano & Furniture eyongezwayo
METAL sokunyathela, welding & AKUXONXE WOKWENZA
Xa nithe nafika Zengrit ngenxa sokunyathela ngqo metal, nawe eza ingcali. Zengrit iye ngugqirha ngqo metal ifakwe iminyaka engaphezu kwama-10, yaye iinjineli zethu uyilo nocoselelo kunye namagcisa abanezakhono kufa ziphakathi kakhulu kweli lizwe. Siyazi ukuba impumelelo imveliso kusoloko kuxhomekeke kumgangatho stampings zayo etyhidiweyo, yaye sizama ukunika amandla, ukuba bhetyebhetye, umgangatho, kwaye nokuthembeka ufuna ukuba iimfuno zakho lemveliso. Zengrit Progressive Process ™ unika umxumi zonke nentuthuzelo ukwazi ukuba ngqo yakho metal sokunyathela kuya kwenziwa okulungileyo ngalo lonke ixesha.
Enoba ufuna 10 okanye 10 million, Zengrit na izixhobo kunye nezixhobo ze stampings ngqo metal nemimiselo yakho ngqo.
Ubukhulu: ngaphezu kwama 25 ngqo metal koomatshini yethu bexhentsa imveliso unako ukuvelisa nende evela ngaphantsi kwe .001 "ukuya .250".
Entsonkothileyo: Thina zibanga nzima, esimbaxa sokunyathela isiko metal. Zokulwa noCelomngeni us! Kungakhathaliseki ukuba zingabi iprojekthi yakho, iqela lethu zobunjineli abazinikeleyo uya kufumana isisombululo ezintsha.
Iimathiriyeli: Ukususela aluminiyam ukuya titanium, sinazo uyilo ilungelo kuzo zonke iintswelo zenu sokunyathela eziphathekayo metal ezizodwa.
Industries: Zengrit iye wakha isiseko layo kumashishini amaninzi siye sakhonza ..
Progressive Ufa: Inkqubo yethu yolondolozo Ufe-endlwini iqinisekisa ukuba sinazo iindawo iphezulu umgangatho, kwakunye nokukwazi ukwenza utshintsho ngokukhawuleza okanye uhlaziyo kwiindawo kwinqanaba kwimveliso.
Iinkonzo Tooling: Zengrit ubhetyebhetye kakhulu iintlobo zezixhobo siya kwakha kwaye usebenzise ukuvelisa zamacandelo akho.
Transfer Iinkqubo: Ngaba isigqibo uphume okuchaneka metal sokunyathela? Zengrit uza kubonelela quote ixabiso zamacandelo akho nokulawula inkqubo yonke zokutshintshelwa izixhobo zakho, izinto, kunye nezixhobo ukusuka kwiziko lakho neyethu.
Makhe kukunceda iingcali zethu ngensimbi yakho bexhentsa iimfuno. Qhagamshelana nathi namhlanje!